2013 – Family Of Films
Hansel & Gretel Get Baked (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Hansel & Gretel Get Baked (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 4.3/10 Google User 82 % Genre: Comedy, Horror Run Time: 1 hour 26 mins Hansel & Gretel Get Baked (2013) သည် IMDb 4.3 Google users 82% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Duane Journey ရိုက်ကူးထား၍ David Tillman က ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Molly C. Quinn, Michael Welch, Lara Flynn Boyle တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Horror ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. မောင်နှမနှစ်ယောက်သည် သူ၏ အလှကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လူတွေကို သတ် ...
Journey to the West (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Journey to the West (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.8/10 Rotten Tomatoes 94% Google User 86 % Genre: Action, Adventure, Comedy Run Time: 1 hour 50 mins ဒီကားလေးက မျောက်ဘုရင်ကားတွေထဲမှ တစ်မူထူးခြားအောင် ရိုက်နိုင်တဲ့ စတီဖင်ချောင်ရဲ့လက်ရာလေးပဲ ကျွန်တော်တော့ ကြိုက်တယ်ဗျ ကြည့်ဖူးသူတွေလည်းကြိုက်မှာပါ မကြည့်ဖူးသူများလည်း ကြည့်ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ… Journey to the West (2013) သည် IMDb 6.8 Rotten Tomatoes 94% Goggle USers 86% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Stephen Chow, Chi-kin Kwok (တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ) ရိုက်ကူးထားကာ Stephen Chow (as Xingchi Zhou), Chi-kin Kwok (as Zijian ...
Enemmy 2013 မြန်မာစာတန်းထိုး
Enemmy 2013 မြန်မာစာတန်းထိုး Enemmy (2013) သည် IMDb 5.3 ရထားသော ဒါရိုက်တာ Ashu Trikhaရိုက်ကူးထားကာ Dileep Shukla က စကားပြော Ashu Trikha ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားသရုပ်ဆောင် Sunil Shetty, Kay Kay Menon, Johnny Lever တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Crime, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ငါးယောက်သည် မူဘိုင်းမြို့ကို ဂိုဏ်းအဖွဲ့စစ်ခင်းမှုကြားက ကာကွယ်ဖိုက တာဝန်ပေးခံရသောအခါ ဘယ်လို အက်ရှင်ခန်း ဒရာမာခန်းတွေ တွေ့ရမလဲ ဇာတ်လမ်းမှာ ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ…. Review By Win Kyaw Thu Synced & Fixed By Thet Paing Oo Encoded By Thet Paing Oo 720p ...
Temptation: Confessions ofaMarriage Counselor (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Temptation: Confessions ofaMarriage Counselor (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 5.1/10 Google User 85 % Genre: Drama, Thriller Run Time: 1 hour 51 mins Temptation: Confessions ofaMarriage Counselor (2013) သည် IMDb 5.1 Google User 85 % ရထားသော ဒါရိုက်တာ Tyler Perry က The Marriage Counselor ဆိုတဲ့ ပြဇာတ်ကို ကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းပြန်လည်ရေးသား ရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Jurnee Smollett-Bell, Vanessa Williams, Brandy Norwood တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Drama, Thriller ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ရည်မှန်းချက်ကြီးမားလွန်းသော ...
The Place Beyond the Pines (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
The Place Beyond the Pines (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 7.3/10 Rotten Tomatoes 80% Google User 87 % Genre: Crime, Drama, Thriller Run Time:2hours 20 mins မော်တော်ဆိုင်ကယ် စတန့်သမားများ ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်ကားလေးတစ်ကားပါ The Place Beyond the Pines (2012) သည် IMDb 7.3 Rotten Tomatoes 80% Google User 87% ဒါရိုက်တာ Derek Cianfrance ရိုက်ကူးထား၍ Derek Cianfrance , Ben Coccio တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Crime, Drama, Thriller ...
The Hangover Part III (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး(၁၈+)
The Hangover Part III (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး(၁၈+) Imdb Ratings: 5.9/10 Google User : 87 % Genre: Comedy, Crime Run Time: 1 hour 40 mins The Hangover Part III (2013) သည် IMDb 5.9 Google User 87% ဒါရိုက်တာ Todd Phillips က ရိုက်ကူးထား၍ Todd Phillips, Craig Mazin တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Crime ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ကို ဒေါသအရမ်းကြီးသော ဂန်းစတားတစ်ဦးက ပြန်ပေးဆွဲသွားသောအခါ Wolf ...
Parker (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.2/10 Google User : 77 % Genre: Action, Crime, Romance Run Time: 1 hour 58 mins Parker (2013) သည် IMDb 7.2 Rotten Google User 77% ဒါရိုက်တာ Taylor Hackford က ရိုက်ကူးထား၍ John J. McLaughlin, Donald E. Westlake တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Crime, Romance ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား ဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… သူခိုးတစ်ယောက်က သူရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဥပေသတွေရဲ့ ထူးခြားသောကုတ်တစ်ခုကို သူရဲ့အဖွဲ့က နှစ်ချက်ကွက်နင်းကာ အသေသတ်ပစ်ထားခဲ့သည် ...
The Great Gatsby မြန်​မာစာတန်းထိုး
The Great Gatsby မြန်​မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.3/10 Google User : 87 % Genre: Drama, Romance Run Time:2hour 37 mins ဒီ ရုပ်ရှင်က ကျနော့်ကို ဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်…..နာမည်ကျော် Spider Man ဇတ်ကားထဲက ပင့်ကူလူသား ပီတာပါကာ လို့ သိကြတဲ့မင်းသား Tobey Maguire နဲ့ တိုင်တန်းနစ် နဲ့ နာမည်ကျော်လာပြီး Blood Diamond ဇတ်ကားနဲ့ ပိုပြီး နာမည်ကျော်လာတဲ့ မင်းသားချော လီယိုနာဒို တို့ အပြင် ဧည့်သယ်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်မင်းသားကြီး အမီတာဘချမ်း လဲ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်….===============================Director: Baz Luhrmann ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီးဇတ်ကားကြာမြင့်ချိန် 2h 23m ရှိတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားကိုMay 1, 2013 (USA) မှာ ရုံတင်ပြသခဲ့ပါတယ်…ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိတ်သက်ကြီး ရရှိမှာကတော့ ...
Begin Again (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Begin Again (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb rating - 7.4 / 10 Rotten Tomatoes - 81 % Genres : Comedy, Drama, Music "သူဘာသီချင်းနား​ထောင်​လဲ ဆိုတာကြည့်​ပြီး လူတစ်​​ယောက်​အ​ကြောင်းကို အများကြီး သိနိုင်​တယ်​။" - Dan Mulligan ဒီကားရဲ့ ဒါရိုက်တာက 2007 မှာတုန်းက Once ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ John Carney ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ မင်းသမီးKeira Knightley နဲ့ မင်းသားကြီး Mark Ruffaloက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာမို့ မလွတ်တမ်းကြည့်သင့်တဲ့ ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ တကယ့်သီချင်းကောင်း 16 ပုဒ်ကို နားထောင်ရမှာဖြစ်လို့ နားထောင်ပြီးတာနဲ့ You Tube မှာ သီချင်းတွေ လိုက်ရှာမိမယ်ဆိုတာ ကျနော် ရဲရဲကြီး ပြောရဲပါတယ်။ ?? မိန်းမဖြစ်သူနဲ့လည်း ကွာရှင်းထားတဲ့ Dan Mulliganတစ်ယောက် သူ ...
Potato Star 2013QR3 မြန်မာစာတန်းထိုး
Potato Star 2013QR3 မြန်မာစာတန်းထိုး Google user : 95% Genres : Romance Film, Family, Comedy, Drama Potato Star 2013QR3 fof channel မှာ Mon, Wed, Fri တိုင်း တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း တကယ်လို့များ ကမ္ဘာနဲ့ လရဲ့တစ်ဝက်လောက်အရွယ်အစားရှိတဲ့ ဂြိုဟ်တစ်ခုနဲ့ တိုက်မိသွားမယ်ဆိုရင် ဘာတွေ ဖြစ်နိုင်မလဲ၊ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းတွေ၊ ဒုက္ခတွေနဲ့ အချစ်တွေရော ပြောင်းလဲသွားနိုင်မလား၊ ဂြိုဟ်နှစ်ခု ဝင်တိုက်မိရာကနေ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြတဲ့ မိသားစုတစ်ခုမှာ ထိတ်လန့်ဖွယ် အရေးပေါ်အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ ဂြိုဟ်သိမ်တစ်ခုဟာ ကမ္ဘာမြေပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတွေ စတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် နိုမိသားစုနဲ့ သူတို့ရဲ့ အိမ်နီးနားချင်းတွေကြားမှ ဒုက္ခရောက်စရာ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဟုန်ဟေဆောင်းဟာ ...
47 Ronin (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
47 Ronin (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 6.3/10 Rotten Tomatoes : 48% Genre: Action, Adventure, Drama Run Time :2hours 8 mins ဒီကားလေးနဲ့ဆို fof က ချစ်ပရိသတ်အတွက် တင်ဆက်ပေးတာ ကား ၂၀၀ မြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ပရိသတ်အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးဆက်လက်ကြိုးစား တင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက် အားပေးကြပါဦးလို့… 47 Ronin (2013) သည် IMDb 6.3 Rotten Tomatoes 48% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Carl Rinsch ရိုက်ကူး၍ Chris Morgan နဲ့ Hossein Amini တို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Ko Shibasaki တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Drama ...
I Can Hear Your Voice 2013 -Korean television series– (မင်းအသံလေးများ ကြားရင်) မြန်မာစာတန်းထိုး (Korea) SBS ရုပ်သံလိုင်းကနေ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ဟာသ၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်၊ မှုခင်း၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသား လီဂျောင်ဆော့နဲ့အတူ မင်းသားယွန်းဆန်ယောင်းနဲ့ မင်းသမီး လီဘိုယောင်းတို့က ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။ အပိုင်း (၁၆) ပိုင်းရှိပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း အသက် ၉ နှစ်အရွယ် ဆူဟာ ဟာ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ ကားစီးနေစဉ်မှာ ရုတ်တရက် မင်ဂျွန်ကွတ် ဆိုတဲ့ လူတစ်ဦးရဲ့ ထရပ်ကားနဲ့ ဝင်တိုက်တာကိုခံလိုက်ရပါတယ်။ မင်ဂျောင်ကွတ်ဆိုတဲ့လူဟာ သူရဲ့ ထရပ်ကား ထဲကနေ ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ သူတို့ကားဆီလာခဲ့ပါတယ်။ ဆိုဟာနဲ့ မင်ဂျွန်ကွတ်တို့ဟာ မျက်လုံးချင်းဆုံမိလိုက်ပြီး ရုတ်တရုတ် ဆိုဟာ နားထဲကြားလိုက်ရတာက ထိုလူစိမ်းရဲ့ အတွေးပါပဲ။ “ငါ ဒါကို ...